Zavatra, ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Ny zavatra dia fampiharana vaovao amin'ny herinandro ao amin'ny App Store. Izahay dia miatrika ny iray amin'ireo GTD (mpitantana asa) tsara indrindra izay misy ho an'ny iPad na dia iray aza amin'ny lafo indrindra indrindra.
Manolotra fifandanjana eo amin'ny fanamorana ny fampiasana sy ny fampiasa ny zavatra, ka hialana amin'ny tsy fisian'ny asa fototra na sarotra be loatra ny fampiharana. Amin'izany no ahafahanao manara-maso ny lahasa, naoty, daty na tetikasa manokana.
Ny fampiharana dia manana fiasa mahaliana toy ny lisitra marani-tsaina na ny fiasan'ny drafitra mba hiasa amin'ny fomba mahomby indrindra azo atao.
Raha te hahita ny interface of Things for iPad ianao ary hahafantatra ny fomba fiasany, ity video manaraka ity dia hanampy anao hamaly ireo fanontanianao:
Zavatra ho an'ny iPad dia fampiharana feno sy vita tsara fa ny vidiny dia mety be loatra amin'izay tadiavinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Zavatra, ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
iTransmission: navaozina ny client Torrent ho an'ny iOS (Cydia)
XLR8, ovao amin'ny iPhone ny feon'ny moteranao